‘पसिना’ गीतमा छुल्ठिमको ठुम्का (भिडियो) « Ramailo छ
‘पसिना’ गीतमा छुल्ठिमको ठुम्का (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Mar 6, 2019
समय : 2:35 pm
फिल्म ‘पसिना’को ‘सुनैको दरबार’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । मिना पोखरेल निरौलाको स्वर रहेको गीतमा अभिनेत्री छुल्ठिम डोल्मा गुरुङको नृत्य रहेको छ । गीत हेर्नुस् :
आर. बि खत्री ‘शरद’को शब्द रहेको गीतमा दिपक शर्माको संगीत रहेको छ । कोरियोग्राफी राजिव समिरको रहेको छ । फिल्ममा गौरव पहारी, अनु शाह, सरोज खनाल, सरोज अर्याल, रवि गिरी, ध्रुव कोइराला, जयनन्द लामा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
आर. बि खत्री ‘शरद’को लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्मलाई शान्ता ढकाल, राम बहादुर खत्रीले निर्माण गरेका हुन् । राम केसीले छायांकन गरेको फिल्मलाई नविन निरौला र भरत रेग्मीले सम्पादन गरेका छन् । राजनराज सिवाकोटी, दिपक शर्मा र थिरज राइको संगीत रहेको छ भने देव महर्जनको द्वन्द्व रहेको छ । फिल्म वैशाख २७ गते रिलिज हुँदैछ ।